Home » Property » Property for Sale (Page 3)
Property, Property for Sale, Stuff for Sale, Wanted | zaw | August 11, 2014
Announcement, Property, Property for Sale, Stuff for Sale | CoCoKo | June 29, 2014
တစ်ထပ်ခွဲတိုက်လုံးချင်း၊ ရေတွင်းတူးပြီး၊ ကိုယ်ပိုင်မီတာ၊ ခြံဝန်းကွန်ကရိတိုင်နှင့် ငါးကြင်းကွက်ခတ်ပြီး၊ အရိပ်အာဝါသကောင်း၊ အေးချမ်းဆိတ်ငြိမ်၊ ဈေးနီး၊ ကျောင်းနီး၊...
Announcement, Other Stuffs to Sell, Property, Property for Rent, Property for Sale, Stuff for Sale, Wanted | admin | June 18, 2014
ရောင်းမည် (သို့) ငှားမည်။ တည်နေရာ - ကျန်စစ်သားလမ်း၊ စီမံကိန်း (၂)၊ ၁၄ ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာ ဈေးနှုန်း - ၆၅ဝ (ရောင်းဈေး)၊ ၂.၅ သိန်း (ငှားဈေး) အကျယ် - ၁၇ ပေ ...
Free Business Listing, Property, Property for Sale, Stuff for Sale, Wanted | Floral Angel | June 5, 2014
မိထ္ထီလာ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် တောင်ကြီး-ထီလာ ကားလမ်းဘေး ..ခြံအတွင်း ပတ်လမ်းနှင့် စိုက်ပျိုးထားသော အပင်များ ပေ 40 ရှိ OK စားသောက်ဆိုင် ခြံ...
သိမ်ကြီးဈေး (ဒီ)ရုံ ဆိုင်ခန်း ရောင်းမည်
Property for Sale, Stuff for Sale, Wanted | ZAW THEIN OO | May 29, 2014
မြို့ တော်ဗဟိုဈေးကြီး (ခေါ်) သိမ်ကြီးဈေး (ဒီ)ရုံ၊ မြေအောက်လွှာ၊ လမ်းကျယ် နှစ်လမ်းဆုံရာ နေရာကောင်းတွင်ရှိသော အကျယ် - ၆ပေ ပတ်လည် ဆိုင်ခန်း နှစ်ခန်း ရောင်းရန်ရှ...
All times are GMT 6.5. The time now is 6:21 am.